Ingabe ufuna ukubuyekeza elidala uyaxebuka upende ngesithuthuthu? Mhlawumbe ufuna ukwengeza ukubonakala "yensimbi ihhashi" touch of lokusungula? Kungakhathaliseki ukuthi wena ukuphishekela umgomo. Kodwa uma uyazibuza "nendlela ukudweba ibhayisikili", khona-ke lapha!
Ake sithi zisuka ukuthi amakhono akhethekile ukuze senze yakho imoto kukhanga kakhulu, asikho isidingo. Nge ekwazi ukumelana ngisho wesikole, uma ine- okulandelayo:
I kuphela zokususa upende omdala.
Sandpaper zezinhlobo ezahlukene evele (ezinkulu, aphakathi nendawo, amancane).
White umoya degreasing evele ngaphambi kokufaka upende noma primer (iyatholakala ku-hardware ezitolo).
Primer for isikhathi eside "Tuning" futhi evenness of ukudaya.
Painting (ekahle - acrylic).
Indlela ukupenda ibhayisikili. Isinyathelo Sokuqala: Ukulungiselela
Imoto ukulungiselela for Umdwebo iqala ukuhlaziya: zaveza nqunu uzimele. Isimo oyisibopho kubhekwa ukuba wekulihlanta. Uma ifreyimu iqukethe ezihlukahlukene amalebula, amabheji kanye nezinye izimfanelo ezidinga uzogcinwa ungaphazanyiswa, kutuswa seal nabo iphepha tape (emaphethelweni akufanele lukwazi ifreyimu yesithombe, noma ngeke, indawo). Udinga ukusebenzisa kuphela futhi lokukhuhla nge ebusweni mnene zokususa upende ungqimba ubudala (nge izilongotshane elincane). Izenzo ezinjalo kufanele kwenziwe nge amagilavu ukugwema kokulimaza isikhumba, futhi endaweni kahle umoya. Okulandelayo udinga degrease kobuso Uhlaka ngomoya emhlophe.
Indlela ukupenda ibhayisikili. Isinyathelo Sesibili: primer
Ukuze le nqubo isimo ibhayisikili kungcono hang kuleyo ndawo ukuthi akunjalo uthinte yimuphi omunye ebusweni, kodwa ukufinyelela kwakulula bevela kuzo zonke izinhlangothi.
Sebenzisa primer singasetshenziswa nge ibhulashi, fafaza noma fafaza isibhamu obukhethekile compressor. Iphele isikhathi ngokuvamile hhayi ningi than suku! (Ezingeni lokushisa hhayi ngaphansana 5-7 degrees).
Ngemva kwalokho, uzimele kumelwe ngokuphindaphindiwe abraded kakhulu ukuze bathole surface flat.
Indlela ukupenda ibhayisikili. Isinyathelo Sesithathu: Isicelo kapende
Uma ungazi ukuthi yini umbala libhayisikili, thina khawuleza ukukwazisa ukuthi ukhetho best - kungcono acrylic.
zako ezisemqoka - ephelele ungqimba flat nge enamathela, omiswe okusheshayo, elikhanyayo umbala Palette (ngezinye izikhathi kwakuba nzima kakhulu - ukuze kutholakale kulokho umbala ukupenda ibhayisikili) kanye ukumelana nomswakama.
Upende sisetshenziswa imivimbo ezincane (ukuthola ubuso ezinemibala efanayo akufanele "aphethwe" izikhathi ezingaphezu kuka-ezimbili endaweni eyodwa).
Uma ufuna ukuthola ncamashi umbala okuboniswe ebhange, khona-ke kumelwe kuqala ukupenda ebusweni upende omhlophe.
Ithemu omiswe upende lemikhiqizo ezahlukene ngokuvamile ezahlukene, ngakho-ke kungcono ukushiya uzimele izinsuku ezimbalwa. Ungabese ukuqoqa libhayisikili futhi ujabulele ride on imoto entsha.
Manje ngoba sewuyazi ukuthi nendlela ukudweba ngebhayisekili ukuze kwakungeyona nje enhle, kodwa futhi ngempela isikhathi eside.
Bagcobe ibhayisikili. isondo Ukumanzisa ihabhu ezingemuva ekuphambukeni ibhayisikili eziveza
Stels Itilosi 810: incazelo, ukubuyekezwa
Sokusinda ummese Modern
Indlela tie izintambo zezicathulo ku amateki enhle?
Kuthiwani uma indoda engasenandaba? Iba owesifazane omusha
Aplasia (agenesis) sezinso: Izimbangela, izimpawu kanye nezici ukwelashwa